POLICE JUDICIAIRE-AMBOHIDAHY: OLONO MIISA TELO (03) MISOLOKY HO MIVAROTRA “MERCURE” NO VOASAMBOTRY NY POLISIN’NY FARITANY AVY ETSY AMBOHIDAHY NIARAKA AMIN’NY ODY GASY SY FITAOVANA FANDREKIREKENA » Police Nationale
« CSP1-ANALAKELY: DIMY LAHY INDRAY NO VOASAMBOTRY NY POLISIN’NY BORIBORITANY VOALOHANY
Filazana momba ny fanamboarana na fanovana « PASSEPORT MALAGASY » »
POLICE JUDICIAIRE-AMBOHIDAHY: OLONO MIISA TELO (03) MISOLOKY HO MIVAROTRA “MERCURE” NO VOASAMBOTRY NY POLISIN’NY FARITANY AVY ETSY AMBOHIDAHY NIARAKA AMIN’NY ODY GASY SY FITAOVANA FANDREKIREKENA
-Ny zoma 22 sy talata 26 desambra 2017 teny Analamahitsy sy Analakely dia lehilahy miisa telo (03) no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny” Police judiciaire” Faritany AMBOHIDAHY noho ny resaka fisolokiana merikiora.
• Ny zoma 22 desambra 2017 dia nisy olona nametraka fitoriana teny amin’ny biraon’ny Polisy ao amin’ny faritany sampana “Police judiciaire”, resaka fisolokiana merikiora. Nanokatra ny fanadihadiana mahakasika izany ireo Polisy niandraikitra ny raharaha ka tsy ela dia olona roa (02) no voasambotra teny Analamahitsy.
• Mbola tratra teny amin’izy ireo ny volo nasiana tanimanga izay nahitana ran’osy miaraka amin’ny divay. Nahitana ody gasy maromaro sy fitaovana maro samihafa amin’ny fisolokiana resaka merikiora ihany koa teny amin’izy ireo.
• Ny fanadihadiana natao no nahalalana fa efa nazahoan’ireto olona ireto 9.000.000Ariary ilay mpitory, ary avy any amin’ny faritra Fianarantsoa ireto olona ireto izao tonga eto Antananarivo izao, ary dia mbola nitohy hatrany ny fikarohana satria dia mbola misy naman’izy iray hafa koa voalaza fa tompon’antoka amin’izao raharaha izao. Ity farany izay voasambotra ny 26 desambra 2017 teo tokony ho tamin’ny 8 ora maraina teny Analakely, ary mbola nahatratrarana merikiora sandoka iray tavoahangy ihany koa.
Ny avy eto anivon’ny Polisim-pirenena dia manentana antsika vahoaka hatrany ho malina manoloana ny firongatry ny asa fisolokiana toa izao.
Natolotra ny Fampanoavana ny 26 desambra 2017 teo ireto olona voarohiro
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=9972